Home » How To.. » (Nature) ဂျပိုးကို ဘယ်လိုနှိမ်နှင်းရမလဲပြောကြပါဦး 20Jul2011
ယူအက်စ်မှာ.. ဂျပိုးနှိမ်နင်းဖို့.. ပရိုကို အခကြေးငွေပေးခေါ်လို့ရတယ်..။
အောက်ကတော့.. အိမ်သုံးပစ္စည်းတွေနဲ့ သတ်နည်းကာကွယ်နည်းတွေ.. ဂိုဂယ်ကရတာ…။
Home remedies can safely kill bed bugs
ကြမ်းပိုးဆိုတဲ့ အကောင်က လူအိပ်မှ တိတ်တဆိတ် အုံလိုက်ကျင်းလိုက်ထွက်လာပြီး တွယ်ကြတာ …စိတ်ပျက်စရာကောင်းတယ် … ။ ကြမ်းပိုးသေတဲ့ စပရေးဘူးတွေရှိတယ်လေ … နေ့တိုင်း ဖြန်းထားလျှင် တဖြည်းဖြည်းတော့ သက်သာလာပါလိမ့်မယ်… ။ ကြမ်းပိုးတွေက ကိုယ့်အိမ်မှာ မရှိလည်း သူများ အိမ်က လာလည်တတ်လို့ နေ့တိုင်း စပရေးဖြန်းကြည့် … နှစ်ပတ်လောက်ဆို အိုကေသွားပြီ ။
ကြမ်းပိုးတွေ အစာမစားပဲ ၆လလောက်အသက်ရှင်နိုင်သတဲ့
မရက်စက်ကြပါနဲ့ကွယ်တို့။ သူ့အသက်လည်း မသတ်ရ၊ မိမိလည်းချမ်းသာစေတဲ့နည်းကတော့…….
ကိုကြောင်ကြီးရေ တကောင် ၁၀၀ နဲ့ မရောင်းပါဘူး။ အလကားပေးပါမယ်။ လာယူတဲ့သူတွေကို ထမင်းကြွေးပါမယ်။
လွယ်လွယ်လေးပါ လောင်ချာ နှစ်လက် ။ Ak-47 ,Magnum,Kodachi,နှင့် လောက်လေးဂွ
ပင်စိမ်းပင်ရဲ့ အနံ့ ကိုရရင် ကြမ်းပိုး မနေနိုင်ပါဘူးတဲ့ ….။ အဲဒိတော့ အိပ်ယာအောက်မှာ ပင်းစိမ်းရိုးတွေ ထားမယ်ဆိုရင် ကြမ်းပိုးပြေး ပါသတဲ့ …။ သေအောင် သတ်တာမဟုတ်ဘူးနော်…။ ကိုကိုကြောင်…….
အားလုံး အကြံပေးကြတာ ကျေဇူးတင်ပါတယ်။
ကျွန်တော့် အတွေ့ အကြုံကတော့ ခြင်ထောင်စိမ်ဆေးပြား Supa tab ကို သုံးတာပဲ။
ဘလှိုင် တို့က အပိုမကြွားဘူး လက်တွေ့ လက်တွေ့ 
ဂျပိုးကို Happy ကထုတ်တဲ့ ဂျပိုးဆေးနဲ့ ရှင်းရင် တကယ် ပျောက်တယ် ဆေးဘူးက တစ်ဘူး (1500) တည်းဆိုတော့ ဈေးလဲ မကြီးဘူး နောက်ဆေးနံ့လည်းမနံ့ဘူး စမ်းကြည့်ပါလား သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ဆို အဲ့သည့် Happyဂျပိုးသတ်ဆေးဘူးကို စကာင်္ပူကတောင် လှမ်းမှာရတဲ့ အထိကောင်းပါတယ်တဲ့
တခါက ရန်ကုန်အိမ်မှာ ဂျပိုးစွဲရော။ အစက မသိဘူး အတော်ကြာမှသိတာ။ ဘယ်လို သတ်သတ် မကုန်နိုင်ဘူး။ ချထိုးအခင်းကြားထဲ ၀င်ပြေးတာလေ။ နောက်ဆုံး အင်းဆက်ကေလာနဲ့ ဆော်မှ မျိုးပြုတ်သွားတယ်။ ရှိတဲ့နေရာပဲ ကွက်ဖြန်းလို့ မရဘူး။ တခါတည်း ၄ဗူးလောက် ၀ယ်ပြီး ကြမ်းတချောင်းတောင် မချန်ပဲ တအိမ်လုံး နေရာအနှံ ပေါပေါလောလောကို ဖြန်းပြစ်တာ တခါတည်း ဥတောင်မကျန်ဘူး အပြုတ်ပဲ။ nature ရေ ဗီဒိုထဲက အ၀တ်တွေ အကုန်လုံးထုတ် ရေနွေးဖျောပြစ်ပြီးလျှော် ပြီးတာနဲ့ (တရက်တည်း အပြီးလုပ်ရမှာနော်) တအိမ်လုံး ချောင်လျှို ချောင်ကြားမကျန်အောင် နေရာလွတ်မကျန်အောင်ဖြန်းပြစ် အဲဒါဆို မျိုးပြုတ်ရော။ လူကတော့ တနေရာသွားနေပေါ့ အနံပျောက်မှ ပြန်ဝင်။ ဒါမှမဟုတ်ရင် အနံမပါတာ ၀ယ်ဖြန်းပေါ့။ အဲလိုသာလုပ် နောက်ဆို ဂျပိုး မြင်ချင်ရင် ပြတိုက်တောင် သွားကြည့်ရမှာ။
ဒူးရင်းသီး အခွံ ကို ဂျပိုး ရှိတဲ့ နေရာတွေ မှာ ထားထားကြည့်ပါ ခင်ဗျာ
myanmar နည်းကတော့ polo ဂျပိုးဆေးနဲ့ ရှင်းရင် ပျောက်တယ်
ဂျပိုး ပြသနာတော့ တခါမှ မကြုံဘူးဘူး..
အကောင်သေးလေးတွေဟာ ၅ ကြိမ် အခွံလဲပြီးရင် အရွယ်ရောက်သွားတယ်။ အရွယ်ရောက်ပြီးသား အကောင်ဟာ
ဆိုးဝါးတဲ့ အနံ့ကို ထုတ်လွှတ်နိုင်ပြီး ညဖက်မှာ လှုပ်ရှားသွားလာပြီး လူတွေရဲ့ သွေးကို စုပ်ယူကြတယ်။
ဂျပိုးကိုက်ရင် ယားယံတဲ့အတွက် လူ နဲ့သေးငယ်တဲ့ တိရိစ္ဆာန် တွေ အတွက် အလွန် စက်ဆုပ်ဖွယ် အင်းဆက်တွေ ဖြစ်တယ်။
ကို Nature ရေ ။ ခင်ဗျားက ဂျပိုး အကြောင်းကို စလိုက်တော့ ကျုပ် စာရေးချင်လာတယ်။
ရေးပါဦး nigimi77 ရေ။ အားပေးပါတယ်။ ဟိုဘ၀က ဘယ်သူ့ကို ဘယ်လိုနှိပ်စက်ခဲ့လဲတော့ အတိတ်ဘ၀ကို ပြန်မမြင်နိုင်လို့ မသိဘူး။ ဒီဘ၀မှာတင် ငယ်ငယ်ကတော့ တော်တော် ရက်စက်ခဲ့ဘူး ပါတယ်။ အကုသိုလ်ပွါးမှာစိုးလို့ မပြောတော့ပါဘူး။
ကိုယ်ကတော့ ကိုယ်နေတဲ့တအိမ်လုံးကို ဆေးအသစ်ပြန်သုတ်လိုက်တယ်။ အဲဒီစပရေးဘူးတွေလဲ ဖျန်းတာဘဲ။ ဗမာပြည်က ဂျပိုးသတ်ဆေးလဲ သုံးတယ်။ အဲဒါကကောင်းတယ်။ ဂျပိုးတွေတော်တော်ငြိမ်သွားတယ်။ကိုယ်အိပ်တဲ့အခန်းထဲမှာ ပစ္စည်းတွေလျှော့ပလိုက်တယ်။တတ်နိုင်သမျှရှင်းသွားအောင်လို့။ ပြီးရင် အိပ်ခန်းကို ကြမ်းခဏခဏတိုက်ပေးတယ်။ ဖုံမရှိအောင်လို့။ ဂျပိုးတွေကလည်းဖုံကနေတဆင့်ဖြစ်လာတယ်လို့ထင်လို့လေ။ ဟုတ်မဟုတ်တော့မသိဘူး။ အော်… ပြီးတော့မွေ့ယာတွေလည်း လွှင့်ပြစ်လိုက်တယ်။ အသစ်သုံးတာပေါ့။ အဲဒါနဲ့ဂျပိုးမရှိတော့ဘူး။ ကြမ်းကတော့တိုက်ပေးရမယ်။ အုတ်နံရံမှာအပေါက်သေးသေးလေးတွေရှိရင်သူတို့ကခိုနေနိုင်သေးတယ်။